Irreecha Finfinne: Lafti Irreecha Finfinne Adda bahe, sirrahee qopha’e jira. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIrreecha Finfinne: Lafti Irreecha Finfinne Adda bahe, sirrahee qopha’e jira.
Irreecha Finfinne: Lafti Irreecha Finfinne Adda bahe, sirrahee qopha’e jira. Iddoon Kun fulduratti asphalittin sirritti hojatamu qaba. Xiiqiidha.
Bara 2008 yeroo waan kana kaasnu heddutu nu morme. Amma milkoofne jirra. Akkuma gaafatame parki Irrecha jedhame jira.
Kana booda iddo kana akka aadaa fi eenyummaa Oromoon ijaaruu fi kunuunsu qabna.
Kana booda hoo?
Nuti yaada dhiyeesana. Yanni akka hin duunef hin baqanne kuno Irreecha Finfinne irra bara jirra. Kana booda
1. College/ university gadaa hatataman jalqabuu. Kutaaleen baruumsa, manni kitaaba ijarame dhume jira. Saganta barnoota( curculem) xumurame jirra. Jiddu kana hayyonni gadaa irratti mari’atanii ni mirkaneesu. Amma Kan hafe eyyama. Innis ilaalama jira.Baruumsi Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliizii kennama. Koorsiin gadaa hundu barsiisa lama qabu. Ogeessa beekumsa ammayya fi gadaa qabuu fi Abbooti gadaa/ hayyuu gadaan kennamu. Kayyoon university kana karaa Gadaan adunyaaf yaada biroo (alternative global system) dhiyeesudha. Dursee Oromoon fi Xophiyaan rakkoo ofii karaa Gadaan akka furatu rakkowwan jiranii yaada faloo gadaa dhiyeesudha.
2. Waggaa 500ffa haaromsa gadaa bara 2022 kabaju qabna . Hubadha haromsa gadaati male jalqaba gada miti.
Kanaaf wajjirri gadaa, galmi gadaa Finfinnetti Wagga lamaan kanatti ijaarame dhumu qaba. Kanaaf dursine yaada dhiyeesana. Aadaa fi Turzimiin itti yaada.
3. Hanga bara 2022 haaromsi gadaa, Oromo gadaa hin qabne akkamitti gadatti akka deebi’u, filannon Abbaa gadaafi haadha siqqee Oromo Oromiyaa guututti gaggeefamu qaba.
Kan biroo yaada nyyata jiddu gala Oromotti dhiyeesu maal jettan?
Yaada keessan nuuf qooda
Oromoon hoteela Giyoon Irreechaa hora finfinnee fi teessoo galma giddu gala gadaa Oromoo gochuuf walitti buufnee bitanna jechaa jira. Oromoon miliyoona tokko qarshii kuma tokko tokko yoo walitti buuse biliyoona tokko ta’a. Gatiin hoteela giyoon kana caalaa?
Motumma gadaaf ni kennina jedhe ture. Kennuun yaa hafu. Hoteela kana Oromoon bituu qaba. Abboti gadaa Irreecha booda hojiin keessan kana ta’u qaba.
Oromia is rising